Antergos, mwanasikana wedangwe weArchLinux | Linux Vakapindwa muropa
Munguva yemazuva ekupedzisira isu hatina kungogamuchira chete nhau dzeanouya mavhezheni eanozivikanwa madistros asi takaonawo kuti matsva matsva ari kukura zvakanyanya. Yakadaro nyaya ye Antergos, imwe yekuparadzirwa kwevana kweArchLinux iyo zvishoma nezvishoma iri kuve neruzhinji rwevanhu uye nharaunda yayo.
Antergos iko kushanduka kweCinnarch, kugoverwa kwekare kwaipa ArchLinux neCinnamon sedhiraivhu rekutanga. Kugoverwa uku kwakashanduka ndokushandura zita rayo kuva izvo zvava kunzi Antergos, izwi reGalician rinoreva «madzitateguru«, Asi kushamwaridzana kwake naArchLinux kwakaramba kuchiwedzera kune mukuru wake uye musimudziri webudiriro, Alexandre Filgueira. Parizvino Antergos inosanganisa mukana wekumisikidza Gnome, Kde, Xfce, Lxde neCinnamon.
La yazvino Antergos Yakavakwa pamusoro pemushandisi, ndiko kuti, mushandisi anosarudza, saka kana iko kuiswa kwatanga, Antergos inokukumbira iwe mamiriro edesktop aunoda kuva nawo nekutadza, iri zvakare hunhu hwekuparadzira uku kana kwapera kuisirwa hapana suite Hofisi otomatiki yakaiswa, izvi imhaka yekuti mushure mekukurukurirana nenharaunda, vagadziri veAntergos vakasarudza kusaisa chero chinhu, kunyangwe zvese zvakakosha zvakanyanya zvinogona kuwanikwa mumadura avo.
ArchLinux Antergos inotora zvakanakisa kana kumbonyanya kunakidza, nekudaro haingoshandisa chete Pacman neAUR repository, asi ichangobva kuburitsa vhezheni shoma yemakomputa asina simba anotibvumidza kuti tiite kumisikidza zvishoma asi se nyore.
Pfungwa nezve Antergos
Pamwe, Antergos iri kutanga kurarama yayo yegoridhe zera uye inotambura chimwe chinhu chakafanana neLinux Mint uye Ubuntu. Parizvino izambuko rakakura pakati peArchLinux uye vashandisi vevashandi uye rinokokawo nharaunda kuti itore mukana wakakura, zvekuti kana mushure mekuburitswa kwesoftware, pane maawa mashoma zvinotora kuti ugamuchire zvazvino uno kuburikidza neiyo repamutemo repamutemo. Chinhu icho vanoshandisa ayo vanokoshesa.
Kana iwe uchinyatsotsvaga chimwe chinhu chakafanana neArchLinux asi iwe usina ruzivo rwakawanda, ndinofunga Antergos ndiko kugovera kwako. Uye zvakare, kune akawanda magwaro nezve iyo distro, kwete chete nezve ayo zvirongwa asi zvakare nezve ayo madhokotera, chaiyo chaiyo kune iyo distro Iwe unofungei nezveAntergos? Wakatoshandisa here?
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » GNU/Linux » Kugoverwa » Antergos, mwanasikana wedangwe weArchLinux
Mhoro Joaquin, iyo diki yakaita sekutanga kubva pakutanga, kuisa izvo zvinodiwa seye arch, kwaziso
Matias Lopez akadaro
Hi Hi Francisco, ndakakanda zvishoma zvishoma munguva pfupi yapfuura, uye ini ndinokugadzirisa, haisi yekuisa Arch Base. Izvo zvinounzawo ese aripo madesktop enharaunda, zvakangofanana neiyo iso Standard. Musiyano uripo ndewekuti Standard inoshandisa GNOME 3 pane Live CD, uye iyo shoma inoshandisa Openbox, saka zvishoma (handizive kana iri iyo .iso inorema zvishoma kana nekuti iyo desktop desktop inoshandisa mashoma zviwanikwa kushandisa iyo inosimudza) . Kwaziso
Nenzira, ndakatanga neUbuntu kutenderedza 2010. Uye chokwadi ndechekuti ndakaedza akawanda distros, asi ini ndakazopedzisira ndadzokera kuUbuntu nekuti ndiyo yaive yakapusa uye ndaive nezvose ndisina zvichemo zvakawanda. Ini ndakatombozama Arch, uye kusvika ndasvika pakombodhi uye iyo WiFi inoshanda asi kwete internet nezvimwe zvinhu, zvakaguma zvichindishungurudza ndikazvisiya, nekuti zvinotora nguva kuve nechinhu chiri kushanda rinenge 100%.
Kusvikira ndaedza Antergos, iko kusununguka kweUbuntu, kwakabatanidzwa nezvose zvakanaka zvinopihwa naArch: mapakeji kusvika parizvino, AUR repository, Wiki yakakura, uye kuburitsa kuburitsa, kutumidza iwo anoita seakanyanya kukosha kwandiri.
Ndinovimba chirevo changu chinobatsira avo vanoramba vachishandisa Ubuntu, uye vasina kuda kutora nhanho mairi.
Kwaziso. Chinyorwa chakanaka, ichi distro nhasi chakakodzera icho. Izvi hazvireve kuti zvine zvimwe zvinhu zvidiki zvekuvandudza, senge zvese.
Pindura Matias López
Zvandisingade nezve iyi distro ndeyekuti zvinotora nguva yakareba kuisa. Zvichida kune avo vane hukama hwakanaka hachisi chinhu, asi avo vedu vanoramba vachitambura nekumhanya kwakadzika havagone kuve ma4, 5, 6 uye kunyangwe maawa manomwe vakamirira kuti isisitimu yekushandisa iise. Kutambudza, uye haudi kunyatso kuyedza.
Antergos iri PURE arch ine mugadziri, Manjaro forogo iyo inononoka nemaune iyo Rolling Release kwemasvondo maviri kudzivirira matambudziko uye kushamisika, pamusoro pekuve uine zvimwe zvinoshandiswa, iyi ndiyo iyo iwe yaunofanirwa kuisa kune avo vane zvinononoka kubatana, zvakadai saLouki, uye pane maitiro ekufamba kuenda kune yakachena arch kana yaiswa, kana zvichidikanwa.
Hector Perez akadaro
Yangu yekutanga distro yaive Sabayon, yakanaka kwazvo nenzira, asi ini handaigona kumisikidza madhiraivha eprinta yangu, ndichitsvaga kugovera kupi kwaive nemadhiraivha andakawana Arch, asi handina kukwanisa kuiisa, ipapo ini ndakawana Antergos uye pano ndichiri , Ndine KDE desktop uye chandinonyanya kufarira nezveAntergos inzvimbo yayo, mamoderita anogara achibatsira uye nekupindura nekukurumidza. Kwaziso
Pindura Hector Perez
Ini ndakatanga kutanga ne openuse uye fedora, ndokuzopedzisira ubuntu, asi ipapo ubuntu zvakandivhiringidza nekunonoka kwayo, uye ikava inorema kwazvo, pandakayeuka kuti light linux yaive sei pamberi. Ipapo ini ndakaenda kune debian kuti ndive nekugadzikana kukuru uye nekuti kazhinji zvinokurumidza, nekuti haina zvinhu zvakawandisa zvinoita kuti inonoke. Asi pakupedzisira ini handina kufarira kuti mapurogiramu acho akange akadzokera kumashure uye ndakanga ndatojaira kushandisa zvimwe zvazvino.
Mukupedzisira ndakawana iyo yandakagara nayo, slackware, kana pamwe isiri iyo inoshamwaridzika linux uye pamwe haina kunyanya kufarirwa, asi ini ndakaona kuti hazvisi izvo zvakaoma kana iwe uchinge waziva kuisa mapakeji. Ndakaona kuti yaive yakagadzikana kana kupfuura zvavaifanira kuva nayo uye yaigona kuisa zvirongwa zvakawanda zvazvino. Kusvika zvino zvinoshanda chaizvo kwandiri.
Pakutanga ini ndakatanga neUbuntu, ndakaedza Debian, Linux Mint, uye OpenSuse. Ndakanga ndisati ndamboshinga kusvika kuna Arch nekuda kwekunetseka kwake kwakachena. Nekudaro, ini ndakawana Antergos uye ndinofunga ndawana kugovera kwangu, nemapakeji ese akagadziridzwa uye panguva ino neKernel 4.01. Kwandiri ndiko kuguma kwekuvhiringidza. Gamuchirai Antergos.
Mhoro miguel mayol tur: ndingaenda sei kune yakachena arch? Ndatenda.
Pindura kune residoblog
Manjaro akaita seantergos chaizvo ??
Iye zvino ini ndinoshandisa Ubuntu, ndakasiya manjaro nekuti ndaive nematambudziko neWiFi network nguva zhinji ini ndanga ndisingazivikanwe hunyengeri, uye zvimwechetezvo neyemarudzi akawanda anodhinda, kuti muUbuntu ndakanga ndisina dambudziko kungobatana nekushanda. Ndiri kuzoona kana ini ndikapa Kare mukana wekuishandisa zvakare chinguva chidiki asi zvaive zvisina kugadzikana. Nenzira, ndinokumbira rubatsiro nepc ine 2.0 uye 4gb ram, inova yakanaka uye inoshanda desktop yaunokurudzira. MuUbuntu ndinoshandisa kubatana
Ichokwadi nezvekuisa Antergos zviri nyore pachayo. Pakombuta yangu (iyo yatove nemakore mashoma) inoshanda kwazvo mvura uye yakasimba. Sekutaura kwevamwe vangu mune zvakataurwa zvakapfuura, ini ndatangawo nemamwe ma distros (Ubuntu, Mint, Opensuse, Manjaro) uye nhasi ndasarudza Antergos. Izvo pasina kupokana kwakanyanya kugovera kweLinux kwandamboedza. Izvo chaizvo zvakasarudzika.